K/Galbeed: Xildhibaano si iskood ah madaxweyne u dooranaya iyo xiisad cusub oo ka billaabatay Baydhabo - Caasimada Online
Home Warar K/Galbeed: Xildhibaano si iskood ah madaxweyne u dooranaya iyo xiisad cusub oo...
K/Galbeed: Xildhibaano si iskood ah madaxweyne u dooranaya iyo xiisad cusub oo ka billaabatay Baydhabo
Baydhabo (Caasimada Online) – Iyadoo Guddiga Doorashada Koonfur Galbeed ay Maalin ka hor ku dhawaaqeen in dib loo dhigay doorashada la filayey inay dhacdo shanta Bishaan ayaa waxaa soo baxayo warar sheegayo inay Xildhibaano qorsheenayaan doorasho dhacdo shanta Bishaan.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka maamulka koofur Galbeed ee Soomaaliya ayaa qorsheynaya iney doortaan Madaxweyne shanata bisha December oo shalay dib looga dhigay taas oo mar kale la mudeeyay 19-ka Bishaan.
Xildhibaanada ayaa sheegay in shaqsiyaad doonaya dano gaar iyo Murashaxiin gaar ah ay dib u dhigeyn doorashada sidaas darteedna aysan ogolaan karin mudada dheeraadka ah ee lagu daray jadwalka doorashada.
Siyasiyiinta qaar oo la hdlay wariyal ku sugan Baydhabo ayaa shegay in walaac ay qaban ay tahay in waqtiga doorahsda xiligan laga dhigay ee 19-ka Bishaan ay inta badan xubnaha matalaa beesha caalamka ay u baxayaan ciida kirismaska oo dabayqada bishaan ah.
Doorashada Koonfur Galbeed ayaa noqotay mid foodo ah waxaana dib loo dhigay illaa 3 jeer oo kala duwan taasoo aan illaa hadda la ogeyn sababta rasmiga ah.
Waxaa jiro warar sheegayo inay qorshahaan wadato dowladda Federaalka Soomaaliya ayna dooneyso inay meesha ka saarto musharixiinta Qaar.
Wararka qaar ayaa sheegayo inay dowladda dooneyso inay Meesha ka saarto Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur isla markaasna ay Guddiga Doorashada ku qasbeyso inay is casilaan si loo soo dhiso Guddi cusub isla markaasna loo dajiyo shuruudo cusub oo Roobow u diidayo inuu ka qeybgalo doorashada.
Waxaa la filayaa inay maalmaha soo socdo is casilaan qaar ka tirsan Guddiga Doorashada, waxaadna aqbaaraadkaas kala socon doontaan Caasimadda Online.